Suldaanka Beesha Madhibaan oo ku dhawaaqay in isaga iyo Beeshiisuba ay taageerayaan xisbiga KULMIYE | Somaliland.Org
January 30, 2009	Hargaysa (Somaliland.org)- Suldaan Daakir Xasan Khaliif oo ka mid ah Salaadiinta Beelaha Somaliland, gaar ahaan Beesha Madhibaan, ayaa maanta ku dhawaaqay in isaga iyo beeshiisuba ay si buuxda u taageerayaan Xisbiga KULMIYE, oo uu sheegay in uu yahay xisbiga ay ka helayaan xaqa ay u leeyihiin in ay ka qayb galaan talada Dalka.
Suldaan Daakir Xasan Khaliif oo maanta shir jaraa’id ku qabtay Hoteelka Xaraf ee magaalada Hargaysa, waxa uu xusay in guud ahaan beelaha Gabooye xil la sheego ay ku leeyihiin xukuumadda Somaliland oo dhan wasiir-ku-xigeenka Wasaaradda Caafimaadka.
“Dadka gabooyaha ah oo tiradoodu badan tahay aan Ummad yar ahayn, waxay xukuumadda jirta ku leeyihiin hal wasiir ku xigeen,” ayuu yidhi Suldaan Daakir. Waxaanu intaa raaciyay isaga oo u muuqday in uu la hadlayo guud ahaan beelaha Gabooye, “Wasiir buuxa ayaanad ku lahayn, Baarlamaan ayaanad ku jirin, Hay’addaha Garsoorka Xaakin kuma lihidin, Xaakim kuma lihidin guud ahaan gobolada Somaliland. Boolisku waa la mid inta gobol ee dalku leeyahay Taliye Saldhig kuma lihidin iska daa Taliye Qaybeed iyo meel kale oo ka saraysa.”
Suldaan Daakir waxa uu baaq baraarujin iyo talo ah u soo jeediyay guud ahaan Beelaha Gabooye “Qofku waa in uu baraarugo oo maskaxda ka shaqaysiiyo, si aynu uga muuqano Hay’ad kasta oo dalku leeyahay; cabashana waxba inoo tarimayso laakiin ficil baa loo baahan yahay, haddii aynu meel kasta waanu dulmanahay la istaagno ciddna waxba inoo qabanmayso, dalku waa dalkeenii, waa in aynu ciddii wax inoo qabanaysa ee intaas aan tilmaamayba inaga qayb gelinaysa, waa in aynu u hurnaa codkeena, dadnimadeena, maskaxdeena iyo maalkeena.” Ayuu yidhi Suldaan Daakir, waxaanu intaa raaciyay “Waxaan idiin sheegayaa intaas aan tilmaamay in xisbiga ina siin karaa uu yahay Xisbiga KULMIYE.” Suldaan Daakir Xasan Khaliif waxa uu si gaar ah talo ugu soo jeediyay beelaha kale ee Gabooye; “Aniga oo ku hadlaya afka Beesha Madhibaan oo aan Suldaan u ahay, waxaan Beelaha kale ee walaalahay ah waxaan leeyahay nimanyahow talladaa qaata oo fikirkaa aanu idiin soo jeedinay nala eega. Anagu haddii aanu nahay beesha Madhibaan waxaanu caddaynaynaa in aanu taageernay kana mid nahay xisbiga KULMIYE, oo aanu ka helayno xaqayaga.”